eNasha.com - शोकबाट शक्ति
विमानचालक वाङ्दी लामालाई गीत गाउने ठूलो रहर थियो । उनकी आमा मञ्जु लामा साहित्यानुरागी भएका कारण उनी आमालाई झक्झक्याउँथे- "आमा गीत लेखिदिनुस् न ! त्यसलाई म गाउनु पर्‍यो !" तर मञ्जुले आफ्नो त्यो विषय नभएका कारण छोराको इच्छा कहिल्यै पूरा गर्न मानिनन् ।
तर अचानक सात वर्षघि धनगढीको एउटा विमान दर्ुघटनामा वाङ्दीको दुःखद् निधन भयो । वाङ्दीको गाउने इच्छा अपूरै रहृयो । एउटा र्सजक हृदय भएकी मञ्जु यो घटनाबाट ज्यादै विचलित भइन् । उनले आफ्नो छोराको हर्ुकाई, बर्ढाई, पर्ढाई केहीमा पनि सम्झौता गरेकी थिइनन्, वाङ्दीका हरेक इच्छा उनको आफ्नो इच्छा हुन्थ्यो । तर जाबो एउटा गीत गाउँछु भन्दा उनले त्यो पूरा गर्न सकिनन् । सात वर्षम्म यो घटनाले पिरेपछि उनका हात काव्यमा चल्न थाल्यो । तिनै काव्यलाई मञ्जुले अहिले गीतिस्वरुपमा ढालेर वाङ्दीलाई र्समर्पण गरेकी छिन् । एक हिसाबमा उनभित्रको शोक र पीडालाई शक्तिमा परिणत गरिन् । त्यही शोकबाट पाएको शक्तिलाई उनले 'र्समर्पण तिमीमा' नाम राखेकी छिन् ।
उनले लेखेका शोकरुपी गीतिशब्दलाई एल्बमको रुप दिएर बजारमा ल्याएकी छिन्, जसमा सुकमित गुरुङ, न्हृयू वज्राचार्य, उदय सोताङ, मनीला सोताङ, सुरेशकुमार, राजु लामा र श्रेया सोताङ स्वर दिएका छन् ।
यस एल्बमलाई हिजो १० गते बिहीबार राजधानीस्थित र्‍याडिशन होटलमा सभामुख सुभाष नेम्वाङले विमोचन गरेका थिए । कार्यक्रममा मञ्जु लामाले भनिन्- "हुन त जीवनमा दुःख होइन सुख बाँढ्नु भन्छन् तर बूढा पाकाले भनेझैँ दुःख बाँढ्यो भने मन हलुङ्गो हुन्छ भनेर तपाइँहरुमाझ यो एल्बम बाँढ्न लागेकी हुँ ।"
यस एल्बमको बिक्रीबाट आएको रकम उनले वृद्धवृद्धा हेरचाह केन्द्रलाई प्रदान गर्ने बताएकी छिन् ।
क्या बात ! सङ्गीतकार तातोपीरो रिलिज समुद्रपार लुकेका कुरा कीर्तिमान अवार्ड नेपाली तारा भिडन्त विचार ट्रयाक बाहिर प्रेम र विवाह पेज थ्री उपलब्धि गीतकार गायिका गायक बजारमा कन्सर्ट